Wararka Maanta: Isniin, Jan 13, 2014-Dowladda Somalia oo hubeysay ciidan dalka lagu tababaray (Sawiro)
Ciidamadan ayaa loo dhammeystiray dhammaan qalabkii iyo gaadiidkii ay ku howlgeli lahaayeen; waxaana la marsiiyay nidaam cusub oo loogu talo-galay in lagu ogaado askariga ciidamada ka tirsan ee hubka la siiyay, iyadoo ay goob-joog ka ahaayeen munaasabaddii lagu howl-gelinayay ciidamadan ka tirsan milateriga Soomaaliya, taliyaha ciidamada xoogga dalka Jen. Daahir Aadan Cilmi iyo saraakiil ajnabi ah.
Saraakiishii tababray ciidamadan ayaa ammaanay sida wanaagsan ee ay u tababarteen ciidamadan, waxaana ciidamadan noqonayaan kuwii ugu horreeyay ee dalka gudihiisa lagu tababbaro, iyadoo loogu magic-daray Cali Boobaaye laba, magacaas oo ay lahaayeen ciidankii ugu horreeyay ee lagu aasaasay ciidamada xoogga dalka.
Madaxda dowladda Soomaaliya ayaa tan iyo sannadkii hore dadaal ugu jiray in ciidamada xoogga dalka lagu tababbaro gudaha dalka, iyagoo sheegay in ciidamada dalka lagu tababbaro ay awood u yeelan doonaan inay adkeynta nabadda ka shaqeeyaan.